Soo dejisan Telegram Desktop 1.9.14 Standard... – Windows – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Telegram Desktop
Telegram – software si ay ula xiriiraan dadka isticmaala si ay kuula sheekeysta. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad beddesho fariimaha qoraalka ah, abuuro joornaalada kooxeed, la wadaago faylasha warbaahinta ama sawirada, isweydaarsiga faylasha la fureen, iwm. Telegram waxay bixisaa helitaanka liiska xiriiriyaha ee isticmaalaha adigoo isticmaalaya iskudhafka oo leh nambarka moobilka ee codsiga. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad raadiso dadka isticmaalaya magaca iyo lambarka telefoonka. Telegram sidoo kale waxay awood u leedahay in ay isbedelaan profile, hubiyaan digniinta iyo ku dar dadka isticmaala liiska madow.
Sheeko macquul ah
Iska beddelka faylasha
Raadinta qofka isticmaalaya lambarka telefoonka
Isku dayinta xiriirrada
Is-dhexgelin leh kaydinta daruurta
Faallo ku saabsan Telegram Desktop
Telegram Desktop Xirfadaha la xiriira